Farlọ Oké Nkume dị na Osimiri Wine nke Ohio | Nchọpụta Pụrụ Iche, Unlọ Ndị Na-adịghị Ebu Maka Arịrịrịrị
Farlọ Ugwu Rock na Wine Country
Home » Ndepụta » Farlọ Ugwu Rock na Wine Country
Nri: 3 - 4
Sq Na: 1800
Wine hụrụ mmanya n'anya? Ọdọ mmiri Erie sunsets? Anụ ọhịa? Nzuzo ya na mma? Akụkọ ihe mere eme?
Nwee ulo ulo a di oke egwu na obodo mmanya Ohio!
Obere ụlọ a na ebe a na-adọba ụgbọala a dịkarịsịrị ike, dị n'ime obi nke ebe bụbu ubi mkpụrụ osisi apụl, nke bụzi nkebi dị na Obodo Geneva, Ohio.
E wuru ụlọ, ebe a na-adọba ụgbọala, na mgbidi ndị dị n'akụkụ site na okwute na okwute ndị a na-edebe n'ógbè ahụ n'oge Ice Age, yana blọk ájá ájá na brik ndị ochie wuru ọtụtụ afọ gara aga.
Onye wuru ya, Clarence Helwig, lekọtara ubi mkpụrụ osisi wee wuo akụkọ mbụ nke ụlọ a na ngwụcha 1940 maka ezinaụlọ ya. Ọ rụkwara ebe a na-adọba ụgbọala nke nwere ụgbọ nke atọ nke nwere ọnụ mmiri nke atọ maka ngwá ọrụ na ime ụlọ a na-echekwa oyi — ha nile na-esighị n'oké nkume. E wuru ụlọ nke abụọ n'ụlọ ahụ na 1980 ma nwee shingles vinyl.
Lọ ahụ dị na ala nke 1.9 acre nke dịkarịsịrị osisi. Oak a na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, maple, na magnolia na-ekpuchi ụlọ ugbo mara mma ma gbakwunye n'echiche nke nchebe na ike nke ihe a dị ịtụnanya. Ahịrị ngere nke ugwu laurel tozuru etozu na rhododendron okpokolo agba na-ebuwanye ibu, na-aga n'ihu yad. N'ogige azụ ahụ, ebe ahụ a kụrụ akụ na-enyefe ndagwurugwu Cowles Creek. A na-akụ ogige dị n'akụkụ anwụ na-eto eto apụl na-eto eto nke na-asọpụrụ ihe nnweta na ihe nketa a. Footkwụ 20-na-20, gbachiri ogige Hügelkultur, Organic ubi ga-enye kichin gị na tomato ọhụrụ na basil n’oge ọkọchị.
Kitchenlọ kichin na-eji nlezianya na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie, mgbidi na-emecha dị ka plasta vaint, oche ndị na-acha ọcha, na ihe ntanetị ọhụụ ọhụụ niile.
Mgbe ị na-eri nri ụtụtụ ma ọ bụ nri abalị, nwee ọ enjoyụ nke squirrels na chipmunks na-agba na azụ nri gị na windo windo windo nke windo abụọ nke na-ele anya n'azụ ọhịa.
Gbanyụọ kichin bụ ime ụlọ 24-site-14-ụkwụ na ebe nchekwa 4-site-4-ụkwụ na ọnụ ụzọ si n'ihu ụlọ ahụ. A na-emezigharị osisi mbụ ahụ na 2015 mgbe onye nwe ụlọ gbanwere ma mezie ya.
Ihe kachasị mkpa maka ime ụlọ ahụ bụ ohuru, stovu na-acha aja aja-enamel nke a na-etinye na brik. Red oak mkpụbelata bụ site na ndụ ụlọ.
Mepụta Wine cellar na Rock Farmhouse gị!
Zọ esi n'ọnụ ụlọ dị n'ụlọ abanye bụ ọnụ / ọmụmụ nke a na-eji pine pine pine trim. Site n'echiche dị jụụ nke mgbada, oke ọhịa, ime ụlọ a bụ ebe kachasị mma maka ịrụ ọrụ n'ime ime. New laminate flooring dị n'ime ụlọ a. N'akụkụ den bụ ebe a na-asa akwa, nke nwere ike ịba okpukpu abụọ dị ka pantiri na nnukwu kaboodu. Oak flooring n'ime ụlọ a.
Bathsa ahụ nke eji nkume mee ihe jupụta ala mbụ. Igwe ịsa ahụ a nwere ebe ịsa ahụ, ebe ịsa ahụ, na mposi. A na-eji uhie osisi oak na-acha uhie uhie eme ihe n'ime ụlọ a na ime ụlọ akwa.
Ezoputara ọnụ ụzọ mgbada ndị a sitere n'ugbo ebe mmiri ara ehi dị na Rock Creek dị nso. A na-eji osisi oak na ahịhịa ndị na-agbapụta site na nke mbụ ahụ ndị ọgba ọsọ maka ngwaike ọnụ ụzọ ụlọ niile!
Nrịgo elu site na kichin bụ nnukwu ime ụlọ nwere nnabata abụọ. Ime ụlọ a nwere windo niile dị na windo, ụlọ elu ụlọ, na ndị na-ete uko ụlọ. Bedroomlọ ime ụlọ nke abụọ na-egosipụta mgbidi nke osisi na-enye nsogbu dị ka ndabere nke ihe ndina ahụ. Ọ dị n’etiti ụlọ ihi ụra abụọ ahụ ka ọ na-asa ahụ, ya na mmiri ya na ya na-asa mbara. A na-eji ọnụ ụzọ Oak barn eme ihe n'ozuzu ya, ma tinye ọnụ ụzọ si na ụlọ nchekwa oyi oyi na-adị n'ime imewe ahụ.
Baslọ a na-apụ apụ gụnyere ime ụlọ ezinaụlọ 20-na-22 ụkwụ / ihe nkiri nwere ihu ngebichi. Isi ihe dị n'ime ime ụlọ a bụ nnukwu ọkụ dị n'okike nke ejiri osisi oak mepụtara site na ihe owuwu mbụ ahụ.
Garalọ ụgbọala ahụ nwere ọnụ ụzọ abụọ na ndị mmeghe (ọhụrụ 2017). Ulo elu, nke na-aga ije dị n'elu ebe a na-adọba ụgbọala ma nwee ike iji ya maka ohere studio ma ọ bụ nchekwa (oke osisi, a na-echekwa ihe ụlọ ebe ahụ ugbu a wee nyefee ya na ihe onwunwe). A na-eji mmiri nke atọ eme ihe dị ka osisi. N'azụ ụlọ a bụ ụlọ ọrụ 12 × 22 ụkwụ enwere ike iji ya mee ihe dị ka ebe a na-etinye mmanya, ebe nchekwa, wdg. A na-etinye ya nke ọma, ọ na-eji ite na-ere ọkụ. Garages nakwa ogbako nwere n'elu ụlọ ígwè, dịkwa ọhụrụ na 2015.
Nkụ osisi dị n'ọhịa, dị mfe maka oge kpo oku abụọ.
Nke a ga-abụ ezigbo ụlọ ezumike nká maka di na nwunye hụrụ mmanya n'anya, ebe dị mma iji zụlite ezinụlọ, ma ọ bụ mgbazinye ụlọ ezumike. Ochicho mgbazinye siri ike n'ihi ụlọ ọrụ mmanya na ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke Geneva-na-na-ọdọ mmiri dị nso n'ụlọ. Ọ bụ nanị 2 kilomita site na Interstate 90 na kilomita anọ site na Lake Erie na osimiri ọha. O nwekwara àkwà mmiri kpuchiri elu 19, ya na ha.
Hụ ụlọ anyị ndị ọzọ na log & Rustic forlọ maka Ire!
Ahịa: $ 259,000
Okwu: 1355 Sherman St.
Koodu mpaghara: 44041
Afọ Wuru: 1950
Ụkwụ Square: 1800
Ime ụlọ: 3 - 4
Nke gara agaLọ Massapequa Park, Ugboro Abụọ!Ihe na-esoteHouselọ ọkụ maka ire ere - YE OL FI RELỌ ỌR.